ऊहाँ व्यर्थमा मर्नु भएन। – Shalom Nepal
Posted on July 23, 2020 July 23, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – हामि इसाईहरू बाँच्नु भनेको ख्रीष्टको लागि बाच्नु हो। पावलको प्रख्यात शब्दहरू रोमको जेलमा छँदा उनले लेखेका थिए, जो सिजरसामु जाने समयको प्रतिक्षा गर्दै थिए। पावललाई थाहा थियो कि यदि उसले बाँच्न जारी नै राख्दछ भने, त्यो समय केवल ख्रीष्टको लागि पूर्णरूपमा हुनेछ, र यदि ऊ मरे भने अझ उसले धेरै पाउने छ । उसले यहाँ पृथ्वीमा आफ्नो जीवन गुमाउन पनि केहि बहुमूल्य ठानेन। उनी येशूको उपस्थितिमा हुन चाहन्थे, तर यदि ऊ जीवित रह्यो भने, उसले सबैलाई सुसमाचार बताउँदथ्यो । त्यसैले पावललाई जिउनु र मर्नुमा केही फरक पार्दैनथ्यो।
यदि त्यसो हो भने तपाईं आफ्नो जीवनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के तपाईं यसलाई हर हालतमा जोगाउन खोज्नुहुन्छ, वा तपाईंले यसलाई राख्नुहुन्छ ताकि परमेश्वोरले यसलाई आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर ? यदि हामी प्रत्येक खतराको डरमा बाँचिरहेका छौं भने, हामीहरूको लागि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ त्यो बिर्सिनछौं। हाम्रो दिनहरू गन्ती गरिएको छ, र हामी त्यसको नियन्त्रणमा छैनौं जब तिनीहरू माथि आउँछन्, परमेश्वोरले हामीलाई सुहाउँदो दृष्टिकोणले प्रयोग गर्नुहुनेछ। जब हामी परमेश्वोरको योजनाको साथ लाइन मा जान्छौं, यो सजिलो पक्कै आउदैन, तर जीवन अझ राम्रो हुन्छ।
त्यसैले ऊहाँ व्यर्थमा मर्नु भएन, जुन कुरा पावललाई राम्रोरी थाहा थियो कि परमेश्वरले गर्न चाहनुहुने कुराको अनुरूप साँचो आनन्द र शान्ति उहाँबाट आउछ । तपाईंको लागि पनि त्यस्तै हो। जब तपाईं उहाँलाई आफ्नो हृदयमा राख्न्नुहुन्छ, तब तपाईंले महशुस गर्नुहुनेछ कि त्यो आनन्द कसरि बढि रहेको छ । तपाईंले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंको जीवन तपाईंको आफ्नै होइन र परमेश्वर तपाईंको दिमागको चासो राख्नुहुन्छ भने, तपाईं शान्तिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, यो जानेर कि तपाईं उहाँको हातमा हुनुहुन्छ।
किनकि मेरो निम्‍ति जिउनु ख्रीष्‍ट हो, र मर्नु लाभ हो। फिलिप्पी १:२१
क्रूस र मुकुट
Posted on July 9, 2020 July 9, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – प्रत्येक इसाईले आ-आफ्नै क्रूस बोक्नु पर्छ। प्रत्येक विश्वासीले आफ्नै बोझ सहनु पदर्छ। तपाईको लागि परमेश्वरले छनौट गर्नुभएको कुरा अरू कसैसँग बोल्नु आवश्यक छैन। हामी सबैले आ-आफ्नो हैसियतमा येशू ख्रीष्टले हाम्रोलागि छनौट गरेको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्छ। यो सडकहरू प्राय: चुनौती र परीक्षणहरूले भरिएको हुन्छ, तर हाम्रो वर्तमान कठिनाइहरू भन्दा पनि परमेश्वरको उद्देश्यहरू अझ […]
Posted on May 21, 2020 May 21, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – सबै कुरा भन्दा बढि परमेश्वोरले तपाईलाई कसरि चिन्नुहुन्छ ? र उहाको अगाडि तपाई आफैलाई कस्तो पाउनुहुन्छ ? यदि हामि स्वर्गीय सम्पति र स्थान हासिल गर्न चाहन्छौ भने संसारको माया मोहबाट टाढा रही आफ्नो हृदयलाई येशु ख्रीष्टतर्फ फर्काउनुहोस।तल संसारको कुरामा हैन माथिको कुरामा मन लगाउनुहोस । जसरि हामीले माटोका मानिसको रूप धारणा गरेका […]